Ukuseta umkhangeli wopelo kwi-iOS | IPhone iindaba
Ukuseta umvavanyi wopelo kwi-iOS
El umkhangeli wopelo Ukulungiswa kwesixhobo esingazenzisiyo sesinye sezinto esizithandayo nesizithiyileyo ngokulinganayo. Siyayithanda kuba iyasivumela ukuba sibhale ngokukhawuleza kwaye, xa siqhelisile kwiscreen seselfowuni yethu, ngaphandle kokujonga kwiscreen. Siyamcaphukela kuba ngamanye amaxesha unobomi obubodwa kwaye ubhala amazwi abonakala elungile kuye hayi la siwafunayo. Nangona sisiseko esisiseko, baninzi abasebenzisi abanamathandabuzo malunga nolawulo lwezixhobo zokubhala.
Ingxaki yokulungisa ngokuzenzekelayo kukuba izama ukusebenzisa ulwimi oluchanekileyo. Ukongeza, i-iPhone, njengemveliso elungileyo ye-Apple, ayiwathandi amagama amabi, ke kuya kufuneka siwabhale ngononophelo ukuba asifuni ukuba ithumele into enentsingiselo eyahluke kwaphela. Kwelinye icala, kusengqiqweni ukuba apho amagama ahlukeneyo ukuthetha ngokufanayo ngolwimi olunye, njengoko kunjalo nakwinto encinci "encinci" esetyenziswa eAlbacete ukuthi "encinci". Kule meko, inokuba ngumbono olungileyo ukukhubaza isilungisi, inkqubo elula kakhulu esiyichazayo apha ngezantsi.
1 Ungayicima njani i-iPhone's spell checker
2 Ulutshintsha njani ulwimi lokujonga ukupela
3 Ungalongeza njani ulwimi
4 Uyenza njani i-Catalan spell checker
5 Yintoni i "Spell Check"?
Ungayicima njani i-iPhone's spell checker
Njengoko benditshilo ngasentla, khubaza ukulungiswa okuzenzekelayo Ilula kakhulu. Kodwa, njengesiqhelo, kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukukhangela useto okanye ukwazi indlela. Siza kuyicima ngokwenza la manyathelo:
Emva koko siya kuGeneral.
Sityibilika phantsi kwaye singena kwiKhibhodi.
Okokugqibela, kufuneka sisebenzise iswitshi, ilever okanye guqula yoMlawuli oziPhetheyo.
Ulutshintsha njani ulwimi lokujonga ukupela
Guqula ulwimi lokujonga iimpazamo Upelo lulula kakhulu, kodwa kunokuba kulungele ukujonga kwindawo elandelayo kuqala. Ngayiphi na imeko, ukutshintsha ulwimi sinokukhetha ezimbini:
Siyichukumisa ibhola yehlabathi kwaye ulwimi luya kutshintsha luye kolunye (umzekelo, iSpanish, isiNgesi, iSpanish…).
Siyayichukumisa kwaye siyibambe kwibhola yehlabathi ukubona zonke iilwimi esizenzileyo kunye nenketho yokungasebenzi kwisichazi-magama esichazayo.
Ungalongeza njani ulwimi
Ukutshintsha ulwimi njengoko kuchaziwe kwinqaku elidlulileyo, kuya kufuneka kuqala yongeza iilwimi ezintsha kwikhibhodi. Oku kusebenza ngolu hlobo lulandelayo: siqala kwisiseko sokuba sifuna i-iPhone yethu, i-iPod Touch okanye i-iPad ukuba ikwazi ukulungisa izinto esizibhala ngeSpanish, kodwa oko, nangasiphi na isizathu, sifuna ukuba yenze njalo nase-United States isiNgesi. Into yokuqala ekufuneka siyenzile kule meko kukudibanisa ikhibhodi. Ukuthintela ukudideka, ndiza kunika iinkcukacha amanyathelo alandelayo:
Njengokuba kucinywa i-AutoCorrect, sivula useto.
Emva koko, siya kuGeneral.
Into elandelayo kukungena kwiiKhibhodi. Ukuba awuzange uyichukumise, ecaleni kwayo uza kubona i-2, leyo yeyikhibhodi yolwimi lwakho kwaye okwesibini yile Emoji.
Okulandelayo kuya kufuneka ucofe ku Yongeza ikhibhodi entsha. Siza kubona ukuba konke esinako kuyaboniswa kuthi.
Into elandelayo ekufuneka siyenzile, ngengqondo, kukukhetha ulwimi esifuna ukulongeza, kule meko sisiNgesi ". Ukuba kukho enye evela e-United Kingdom, enye engafaki nto isiNgesi apho iApple ihlala khona, oko kukuthi, iUnited States
Ngoku ukuba sinolwimi olongeziweyo, besizakuba nalo, kodwa lusetyenziswa njani? Ewe, kufuneka siye kuso nasiphi na isicelo apho sinokubhala khona.
Okokugqibela, kuya kufuneka sikhethe ulwimi ngokuchaphazela ibhola yehlabathi eya kuvela ecaleni kobuso esingena ngabo kwi-Emoji.
Uyenza njani i-Catalan spell checker
Lo ngumbuzo osibuze nawo. Akukho ndlela ikhethekileyo Qalisa ukusebenza kwesiKhangeli seCatalan, kuba sithetha ngolwimi olusemthethweni lweIberia Peninsula, ke yenziwa ngohlobo olufanayo ebesinokuyenza ngalo naluphi na olunye ulwimi kuninzi esinalo. Kodwa ekubeni umbuzo ngowolwimi oluthile, ukuba besingenawo umrhwebi ozenzekelayo ukuze angawulungisi amagama esiCatalan, kuya kufuneka simanyane yonke into echaziweyo kumanqaku adlulileyo:
Ukuba asiyisebenzisi ngokufanelekileyo, ngokufanelekileyo, kufuneka sisebenzise ukulungiswa kwe-autocorrect njengoko sichazile ngaphambili.
Senza le bendiyichazile kwinqaku elidlulileyo, kodwa sitshintsha kuphela inyathelo lokukhetha ulwimi, ngelo xesha, ngokufanelekileyo, siya kukhangela "isiCatalan" kwaye siyongeze.
Okokugqibela, siza kudlala kwibhola yehlabathi kwaye sikhethe «isiCatalan». Ukuba siyayichukumisa ibhola yehlabathi ngaphandle kokuyibamba, iyakutshintsha phakathi kweelwimi kwaye siyazi ukuba ifikelele kwisiCatalan xa «isiCatalan» sibonakala kwisithuba sendawo (into ethi inyamalale imizuzwana embalwa emva kokuvela).
Yintoni i "Spell Check"?
Ngokuzenzekelayo, zonke izixhobo ze-iOS zinokuLungiswa ngokuZenzekelayo kunye nokuLungisa ngokuZenzekelayo. khangela upelo. Ngale ndlela, xa siza kubhala igama elingalunganga, ukuba lifumene elinye kwisichazi-magama esinokulingana, liya kusitshintshela lona ngokuzenzekelayo. Kodwa ukuba, umzekelo, sifuna ukubeka igama elingabhalwanga kakuhle ngenjongo, sinokuyenza ngokucinezela u "x" ovela ecaleni kwegama eliphakanyisiweyo, eliya kusivumela ukuba silishiye igama esilibhalileyo. Umzekelo, ukuba sibeka igama elithi "vurro" (uxolo kwabo balila igazi ngoku) kwaye sibethe u "x", liya kuvela kwibhokisi yokubhala enomgca obomvu ngaphantsi.
Izinketho zahlulwe kwimeko apho sifuna ukuba nayo njengoko kuhlala kunjalo kwiikhompyuter. Kwiikhompyuter apho sinokubhala khona ngekhibhodi enkudlwana kunye nentuthuzelo engakumbi, ndicinga ukuba kungcono ukujonga ukubhala kwento esiyibhalayo kwaye lumkisa ngeempazamo ezinokwenzeka, kodwa musa ukutshintsha amagama kuthi. Ngapha koko, bendivavanya iMac kudala ndachwetheza "Drop Simulator" kabini xa ndifuna ukuthayipha "Goat Simulator". Nangona zenziwe zasebenza ngokungagqibekanga, iinketho zahlukile ukuze sikwazi ukuthatha isigqibo sokuba loluphi uhlobo loncedo esilukhethayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Ukuseta umvavanyi wopelo kwi-iOS
Elena Ferreira sitsho
Into endiyifunayo kukujonga isipelingi ukuba UNGANDIBUZI. Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba ndihamba njani ndiyithulisa?
Phendula ku-Elena Ferreira
Akukonwabisi ukubuza ngokuvakalayo (ngakumbi ukuba umntu uzama ukuchwetheza eofisini ethule), ke kuye kwafuneka ndikhethe: ifowuni (engonwabisi ngakumbi nangoku). Kudala ndikhangela isifundo kwiwebhu ukundinceda ngesi sihloko okwexeshana, kodwa andisifumani :(.
Ndifakele i-wuasar kwikhompyuter yam okanye i-pc, ndifuna ukwazi ukufaka:
Ndingayithumela njani ifayile ye-wuasar kumhlobo omtsha okanye izihlobo ezininzi, ngaphandle kokuba neqela
Andifumani ndlela inokwenzeka yokufikelela kunye nokuhlela amagama okujonga.
Kuyenzeka ukuba uyibeke / uyisuse.
Kwaye rhoxisa okongeziweyo.
Kodwa andiboni nayiphi na indlela ndinenkani yokucebisa ububhanxa
Njengamagama uLibertad kunye noLa Paz bahlala njengamagama afanelekileyo
I-Apple iya kuzisa ibhalansi yayo yekota nge-Epreli 25
IMiitomo, umdlalo wokuqala kaNintendo we-iOS, uza kufika ngoMatshi 31 kumazwe amaninzi